Cadawgii aan saaxiibka mooday. W/Q: Sharmarke Cabdi Ibraahim ( Dhuux)
Monday January 09, 2017 - 22:38:20 in Maqaallo by John Smith
Waxa aan la soo koray waalidkay oo baahida iyo basiiradaba iga ilaalin jiray. Waxaan ahaa ilmo yar oo dhabta hooyadii ku seexda oo aan ka war qabin waxa dunidan ka
Waxa aan la soo koray waalidkay oo baahida iyo basiiradaba iga ilaalin jiray. Waxaan ahaa ilmo yar oo dhabta hooyadii ku seexda oo aan ka war qabin waxa dunidan ka socda. Keliya waalidkay ayaan iskala noolaa oo cidd I dhibta weligay maan la kulmin. Habeen iyo maalin ba waxay ka fekeri jireen sidii aan u noqon lahaa hanad hiigsi dheer leh. Inta badan markaan nolosha qoyska ku gudo jirno waxay iiga sheekayn jireen halyeeyo dunidda soo maray, oo magac iyo milgo ku dhex lahaa bulshooyinkooga. Qiyaastii waxaan is leeyahay sheekooyinkaas sababta ay iigu sheegi jireen waxay ahayd inaan ku daydo oo aan raaco raadkoodii dheefta badnaa. Markaan arko kalgacalka iyo wanaaga layga hayo guriga waxaan isu haystay inaanu jirin qof ila mid ah oo dunidan guud saaran. Farxada iyo rayn-raynta wejigayga ka muuqata waxaad moodaa in janadii udgoonayd laygu bushaareeyey.